Uyenza njani iPoland App yokuGcina iiPhepha zeMveliso kuLungiso lwangaphambili | Martech Zone
Uyenza njani iPoland App yokuGcina iiPhepha zeMveliso ngaphambi kokumiliselwa
NgoLwesihlanu, Agasti 4, 2017 NgoLwesine, Agasti 3, 2017 ULiza Knotko
Isigaba sangaphambi kokumiliselwa lelinye lawona maxesha abaluleke kakhulu kumjikelo wobomi beapp. Abapapashi kufuneka bajongane nemisebenzi emininzi ebeka ixesha labo kulawulo kunye nezakhono zokubeka phambili kuvavanyo. Nangona kunjalo, uninzi lwabathengisi beapps bayasilela ukuqonda ukuba uvavanyo olunobuchule lwe-A / B lunokuhambisa izinto kubo kwaye luncede kwimisebenzi eyahlukeneyo yokwazisa kwangaphambili.
Zininzi iindlela abapapashi abanokubeka uvavanyo lwe-A / B ekusebenziseni ngaphambi kokuqala kwenkqubo kwivenkile: ukusuka ekuphuculeni iphepha lemveliso eliguqula amandla alibethe ngqo entloko ngokubekwa kweapp yakho. Olu luhlu lwemisebenzi yokuvavanya ukwahlulahlula inokuluchaza kwakhona ixesha lakho lokuqalisa lokugcina ixesha kunye nokufaka isandla ekusebenzeni kakuhle.
Ukuqiniswa kwamaphepha emveliso ngovavanyo lwe-A / B
Zonke izinto ezigciniweyo zephepha lemveliso (ukusuka kwigama ukuya kwiscreen) zinendima yazo ekwenzeni umbono wabasebenzisi weapp. Ezi ziqwenga zamaphepha osetyenziso zinempembelelo enkulu kuguqulo. Nangona kunjalo, uninzi lwabathengisi lukutyeshela ukubaluleka kwabo ngakumbi xa usetyenziso lungekho evenkileni okwangoku.
Nokuba iingqondo zohlalutyo ezingalitshintshi igama eliphambili ngaphandle kophando olululo zihlala zilibala ukuba iphepha lemveliso yenkqubo yeyona ndawo yokwenza izigqibo. Icon, izikrini, inkcazo, njl.
Ithuku lokuthembela alonelanga. Ngelishwa, ngumgangatho oqhelekileyo ukubeka ukhuthazo ecaleni kwaye uxhomekeke kwimbono yamalungu eqela lakho ongayinanziyo into ekhoyo yokugcina ivenkile. Uvavanyo lwe-A / B lwenza ukuba ushiye yonke imidlalo yokuqikelela ngasemva kwaye ukhokelwe ngamanani abalulekileyo.
Umdlalo weTshintshi ufumana igama elifanelekileyo leTagline ngoncedo lweeNtengiso ze-Facebook
Uvavanyo lokwahlula sesona sixhobo silungileyo sokwenza imveliso yezinto zekhasi lakho ligqobhoze olona manyano luguqulayo I-Facebook inokusetyenziselwa ukukhangela isibheno sezinto ezizodwa kwimikhankaso yentengiso.
Umzekelo, iMidlalo yeNdawo yeNdawo isebenzise iiNtengiso zikaFacebook ukukhetha igama lethegi yomdlalo weTransformers oza kubakho. Benze amaphepha amathathu okufika akhankanya amagama ohlukeneyo e-app kwaye aqalise umkhankaso wentengiso we-Facebook ojolise ngokufanayo. Ngenxa yoko, umahluko 'weTransformers: Earth Wars' waphumelela kwaye wasetyenziselwa yonke imisebenzi yentengiso yeapp.
Nangona kunjalo, iintengiso ze-Facebook aziboneleli ngemeko. Ke, xa kuziwa kwiindlela ezintsonkothileyo nezinikezelweyo, kungcono ukusebenzisa amaqonga okukhuphela ivenkile enje nge YahlulaMetrics.
Ukwahlulahlula-kuvavanya kungqina ukuba uMkhwa weShishini awusebenzeli iintaka ezinomsindo
Iziphumo zovavanyo lwe-A / B zinokumangalisa ngokwenene. URovio wasifunda esi sifundo ngaphambi kokumilisela 'iiNtsholongwane ezinomsindo 2' Kwavela ukuba iifoto zesikrini ezenziwa ngendlela ebhetele kunaleyo yomhlaba ophikisana nokutyekela kwemidlalo ngokubanzi. Uvavanyo lokwahlulahlula lubonakalisile ukuba abathengi 'beentaka ezinomsindo' abanakulungelwa njengabadlali beqokobhe elinzima ukuze imeko zeshishini zingasetyenziswa.
Ke ngoko, uvavanyo lwangaphambi kokuqaliswa kovavanyo luthintele impazamo ebabazekayo yokusebenzisa ii-skrini kunye nokuqhelaniswa okungalunganga. Ekukhululweni kweentaka ezinomsindo 2, iapp iye yafumana i-2,5 yezigidi zokufakelwa okungaphezulu kwiveki nje.
Ke, ulungelelwaniso olukrelekrele lwazo zonke izinto zephepha lemveliso ziqinisekisa olona tshintsho lubonakalayo kuzo zombini i-organic kunye nokuhlawulwa kwetrafikhi ngexesha leeveki zokuqala zobomi bohlelo lokusebenza evenkileni.
I-G5 isebenzise uvavanyo lwe-A / B Ukuchonga abaphulaphuli abaLungileyo kunye neyona Ndlela yeNtengiso
Ukuba nombono ocacileyo wabaphulaphuli ekujoliswe kubo yeyona nto iphambili kuyo nayiphi na impumelelo yeapp. Ngokukhawuleza ukuchonga ukuba ngubani abathengi bakho, kungcono. Uvavanyo lwe-A / B lunceda ekusombululeni le ngxaki nokuba usetyenziso lwakho alukho evenkileni.
Unokufumana ukuba ngubani onokubanakho ukufaka usetyenziso lwakho lokulinga kumaqela ahlukeneyo abantu. Ezi datha zibalulekile kuyo nayiphi na eminye imisebenzi yentengiso nje ukuba usetyenziso lwakho lubukhoma. Umzekelo, i-G5 Entertainment yaqhuba uthotho lovavanyo lwe-app yabo 'efihliweyo yesiXeko' kwaye bafumanisa ukuba eyona nto bajolise kuyo kukujolisa kwabasetyhini abangama-35 + abathanda imidlalo yebhodi kwaye banomdla kwiiphazili, iqhina kunye neemfihlakalo.
Unako kwakhona ukuqokelela abanokuba ngabasebenzisi zonxibelelwano ngaphakathi kolo lwakhiwo lwangaphambi kokukhutshwa kwe-A / B yovavanyo lokwakha uluhlu lwenkampani kwincwadana yeendaba kunye nohlaziyo lweapp.
Uvavanyo lwe-A / B lubalulekile kwimigangatho yemfundo yeentengiso ngokunjalo. Ukufunyanwa komthombo wentengiso ozisa uninzi lwabasebenzisi abathembekileyo ukuqhubela phambili nasiphi na isicwangciso somdlalo wentengiso. Iinkampani zokupapasha ii-App zijonga ukusebenza kweendlela ezahlukeneyo zentengiso ngovavanyo lokwahlulahlula. Xa kuthelekiswa nokusebenza kwabo, bakhethe enye yeendlela ezahlukeneyo zokukhuthaza imidlalo yabo emitsha kunye neeapps.
I-Prisma ichaze ukubekwa ngokugqibeleleyo usebenzisa ii-A / B zokuzama
Abapapashi bahlala bedibana nengxaki yokukhetha amanqaku eapps ahambelana ikakhulu nabaphulaphuli babo. Akukho sidingo sokufunda amagqabi eti, vele usebenze uthotho lweemvavanyo ze-A / B. Umzekelo, iPrisma yeza kuvavanyo lokwahlulahlula ukubona abasebenzisi iziphumo ezizithandayo phakathi kwezi zinikezelwa yiapps:
Ukuba ucwangcisa ukuba nesicelo esihlawulelweyo, uvavanyo lwe-A / B lunokukunceda uqinisekise ukulunga kwesi sigqibo. Kubaluleke kakhulu ukumisela ixabiso elingayi koyikisa abathengi abanokubakho. Uvavanyo lwe-A / B lunokubonisa ukuba kuya kufuneka uhlaziye umgaqo-nkqubo wamaxabiso we-app ngenxa yemodeli yasimahla ngokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Amashumi amahlanu anantathu ayaphumelela kubeko lwasekhaya Enkosi ngokuHlulwa-kuvavanywa
Isigaba sangaphambi kokumiliselwa okanye ixesha ngaphambi kokuba uyilo olukhulu lwesicelo lubonakale ngokwenyani ngokwenza ukuba usetyenziso lwakho lube lwasekhaya. Nangona kunjalo, akonelanga ukuguqulela inkcazo, kwaye kuya kufuneka ubeke indawo engaphaya kwesicatshulwa. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba uyitshintsha imveliso yakho iyenzela enye inkcubeko, hayi olunye ulwimi. Uvavanyo lwe-A / B luyasebenza ukuvavanya ii-hypothesis ezahlukeneyo zenkcubeko.
Umzekelo, i-FiftyThree isebenzisa uvavanyo lokwahlulahlulahlula-hlula usetyenziso lwePhepha kwintengiso ethetha isiTshayina. Ukuhlaziywa kwescreenshots ngesiTshayina esineemvelaphi ezimibala-bala kuye kwaba ne-33% yokuguqula okungcono kunesiNgesi.
Akukho sidingo sokuzinika ixesha elinzima uzama ukuqikelela ukuba yintoni eya kusebenza ngcono kwi-app yakho ngaphambi kokumiliselwa kwayo. Sebenzisa uvavanyo lwe-A / B, unokuxhobisa uguquko lwakho nokuba ngaba i-app ayiphili. Ke, uya kuqinisekisa iziphumo ze-stellar kwasekuqaleni kobomi beapp yakho evenkileni.
Ukwahlulahlula-hlula akuthathi kuphela inqanaba lokuguqula kwinqanaba elitsha kraca; ikwaququzelela inkqubo yokuthatha izigqibo iyenze icace kwaye isuse ukungqubana okungafunekiyo kwamaqela. Kwaye usebenzisa amaqonga anje YahlulaMetricsAbathengisi bakwafumana ulwazi oluxabisekileyo kwindlela yokuziphatha kwabasebenzisi enokusetyenziselwa uphuhliso olungaphezulu kweapp kunye nokugcina iphepha lokucoca.
tags: uvavanyo lwe-appQalisausetyenziso lweselfowuni uvavanyoiphepha lemveliso yosetyenzisoUkuvavanywa kohlelo lokusebenza lweselfowuniiphepha lokugcina usetyenzisoukuvavanywa kwesoftwareizicelo zeselulaapps mobileukwazisa kwangaphambiliuvavanyo lwangaphambi kokuqaliswaukuvavanywa kwemvelisouvavanyo
U-Liza Knotko nguMphathi weNtengiso we-Сontent e YahlulaMetrics, Isixhobo se-A / B sokuvavanya isixhobo esithenjiwe yiRovio, MSQRD, Prisma kunye neZeptolab. SplitMetrics inceda abaphuhlisi bohlelo lokusebenza lweselfowuni ukuba baphumeze ukusebenza kwevenkile ngokusebenza kweemvavanyo ze-A / B kunye nokuhlalutya iziphumo.
NgaphakathiVeza iiFuels zokuya kwiNtengiso kunye nokuJolisa kuLwazi
Ngo-Okthobha u-2017, kufuneka ube unesatifikethi se-SSL esingafihliyo
Agasti 7, 2017 kwi-4: 44 AM
Wow, thanda la matyala okuthengisa kwangaphambili. Enkoso ngokwabelana!